Madheshvani : The voice of Madhesh - गौर घटनालाई उपेन्द्र यादवले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेचे : अमर यादव
अध्यक्ष, मधेश तराई फोरम
० अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— अहिले मुलुकमा दुई तिहाईको सरकार छ । विभिन्न नियम कानूनहरू बनाउने र संघीयतालाई केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने जस्ता विशेष अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीले लिइराख्नुभएको छ । संघीयतालाई बाध्यत्मक रूपमा स्वीकार गरिएको हो । राज्यले संघीयता चाहेकै थिएन । अहिले संघीयता आइसकेको अवस्थामा प्रदेशहरूलाई संघबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले, हामीले यस्ता परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं । अहिले पनि संघीयता पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छैन । बाहिरबाट हेर्दा मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, तर भित्रबाट अहिले पनि अस्थिरता कायमै छ ।
० मधेशको राजनीतिमा पछिल्लो समय जुन किसिमका घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— मधेशका राजनीतिक दल र नेताहरू मध्ये कोही सत्तामा गएर व्यापार गरिरहेका छन् भने कोही सत्ता बाहिर बसेर बाटो कुर्दैछन् । कोही त ठूलठूला नारा दिएर आत्मसमर्पण गरेको स्थिति पनि छ । राजनीतिरूपमा मधेशको परिस्थिति त अहिले यस्तै छ ।
० तपाइँ राजनीतिबाट किन टाढिनुभएको छ ?
— काठमाडौंकेन्द्रित राजनीति गर्ने मधेशी नेताहरू बेला–बेलामा मिडियामा आइरहन्छन् तर, मधेशकेन्द्रित राजनीति गरिरहेको हुनाले मिडियामा त्यति आउँदैन । म राजनीतिबाट टाढा छैन । म मिडियामुखी मात्र नभएर राजनीतिक रणनीति निर्माण गर्दैछु ।
० भनेपछि रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
— बन्दैछ । हाम्रा साथीहरू सम्पर्कमै छन् । परिस्थिति विश्लेषण गर्दै हामी आफ्नो बाटो तय गर्छौं । अहिले हामी वस्तुस्थिति नियालिरहेका छौं । विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई सुरक्षित गर्ने र भएका कमीकमजोरीहरूलाई सुधारका लागि दबाब दिने हाम्रो रणनीति छ । प्रदेश र केन्द्रका धेरै नियमहरू ऐनहरू बाँझिएका छन् । मधेशका सत्ताधारी पार्टीहरू व्यापार गर्ने पुरानै चरित्र हो । विगतमा पहाडवादी पार्टीहरूले पनि त्यस्तै गरेका थिए र मधेशवादी पार्टी पनि त्यसबाट अछुतो रह्न सकेका छैनन् ।
० तपाइँ फोरम नेपालको संस्थापक हुनुहुन्छ, तपाइँका पूर्वसहयात्री उपेन्द्र यादव अहिले उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको कार्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
— उहाँ समर्पणवादी बाटोमा गइसक्नुभएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको नारा दिने तर मधेशलाई केही जिल्लामा खुम्च्याउने काम गरिएको छ । उहाँ त पहिला पनि उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, मालदार मन्त्रालयहरू लिएर बस्नुभएकै हो । यो कुनै नौलो कुरा होइन । मेचीदेखि महाकालीसम्मका लागि आन्दोलन गराउने र केही जिल्लामा व्यापारी र आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गराउने, माल उठाउने जस्ता कुराहरू पहिलादेखि गर्दै आउनुभएको छ । पहिला पनि हाम्रो विरोध त्यहीं प्रवृत्तिका विरूद्धमा थियो । सबै राजनीतिक दलहरूले लेवी उठाएर राजनीतिक नियुक्तिहरू गरिरहेको देखिएको छ । लेवी बुझाउनेहरूले त उठाइहाल्छन् नि । त्यसमा मधेशी नेताहरू पनि सत्ताको एउटा अंग भइसकेपछि त्यो गर्नु स्वाभाविक नै हो, उनीहरूको दृष्टिकोणले ।
० उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गराउने शर्तमा लिखित सहमति गरेर सरकारमा सहभागिता जनाउनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
— नेपालको राजनीतिमा बुँदैबुँदाको राजनीति त धेरै भयो । र यो पहिलादेखि नै हुँदै आएको छ । जो पनि सत्तामा जानका लागि दुई÷चार बुँदा सहमति गर्ने चलन छ । पहिला विजय गच्छदार पनि यस्तै सहमति गर्दै सरकारमा जाने गरेका थिए । सम्झौता गरेर सरकारमा गएको भनेर फेस सेभिङ्ग गर्दै जनतालाई झुक्याउँदै आएका छन् । सत्तामा गएर व्यापार गर्ने र चुनाव आउनुभन्दा पहिला माग पूरा भएन भनी सरकारबाट बाहिर आउने र जनताबीच गएर ठूलो क्रान्तिकारी नारा दिएर जनताको इमोसनसँग खेल्दै आएका छन् । विगतमा जनताको भावनात्मक मत लिने कार्य गर्दै आएका छन् । तर, जनता अब सचेत भइसकेका छन् ।
० भनेपछि, मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले मुद्दालाई मुद्रासँग साट्दै आएका छन् ?
— साटेकै हुन् नि । त्यो त पहिलादेखि नै भइरहेको छ । सबै पार्टीले मुद्दालाई मुद्रासँग साटेका छन् । यिनीहरू त राज्यले पालेका मान्छे हुन् ।
० तपाइँ सहयात्री रहिसक्नुभएको छ, उपेन्द्र यादवले साँच्चै नै मधेश मुद्दाको समाधान चाहेका थिए कि मुद्दालाई जहिले पनि क्यास गर्दै जाने रणनीति हो ?
— ती व्यवक्तिहरू कस्ता छन् भने जहिले पनि अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । त्यत्रो मधेश आन्दोलन भयो, गौरमै आन्दोलन भयो । गौर आन्दोलनको क्रममा दुःखदायी घटनाहरू भए । हामी पनि भागेर गयौं, उहाँ पनि भागेर आउनुभयो । प्रवासमा हाम्रो भेट हुँदा उपेन्द्रजीले मलाई भन्नुभयो कि तपाइँले ठूलो आन्दोलन गराइदिनु भयो, प्रवासमै बस्नुपर्छ, १० वर्ष कारावास बस्नुपर्छ, राजनीतिक चौपट भयो । भनेपछि विगतमा जुन नेताले यस्ता कुरा गरेका थिए अहिले यसैबाट थाहा हुन्छ नि । त्यस्ता नेताले समस्याको समाधान कहिल्यै चाहँदैन ।
० भनेपछि, गौर घटनाबाट उपेन्द्रजीलाई लाभ भयो ?
— फाइदा त भएकै हो नि । उहाँले गौर घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेच्नुभयो । त्यसलाई भजाएर अहिलेसम्म पनि खाइरहनु भएको छ ।
० त्यो बेला तपाइँ कसरी पछि पर्नुभयो ?
— सबै पार्टीमा राम्रा मान्छेहरू पछि पर्ने गरेका छन् । यहाँ व्यापारी नेताहरू मात्रै टिक्ने गरेका छन् । ब्रिफकेश लिएर जाने, डलर दिनेहरू नै हावी भएका हुन्छन् । हामीसँग त्यस्तो केही पनि हुँदैन । हामी नैतिकता र सिद्धान्तवादी राजनीतिमा आधारित हुन्छौं ।
० खासगरी, गौर घटना के थियो ?
— गौर घटनाको बारेमा प्रचण्डजीलाई बढी थाहा छ । त्यो बेला जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । विगतमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो खिलराज रेग्मी, उहाँकै अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यसको त रिपोर्ट नै अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन । त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्यले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्छ भने त्यसको रिपोर्ट त सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो । त्यो रिपोर्ट बालुवाटारमा कहीं थन्केर बसेको होला वा फोहोरमा फालिदिएको होला ।
० सत्तारूढ फोरम र प्रतिपक्षमा रहेको राजपाबीच एकताको कुरा पनि चल्दैछ । यिनीहरूबीच एकता होला त ?
— यहाँ प्रतिपक्षमा कोही छैन । राजपा पनि सरकारकै अंग हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा राजपा त छँदैछ नि । प्रदेश प्रमुख बनाएकै छ । प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारबाट हटेपछि न प्रतिपक्षमा भएको मान्न सकिन्छ । सत्ताको भत्ता खाएपछि सत्तापक्ष भएन ? सांसदहरूले पनि राज्यको भत्ता खाइरहेका छन्, काठमाडौंमा चिल्ला–चिल्ला गाडीमा चढेकै छन् ।
० तर, यिनीहरूले अहिले पनि हामी आन्दोलनमै छौं भनिरहेका छन् नि ?
— त्यो सब नाटक मात्र हो । सरकारमा जान नपाएर राजपालाई छट्पटी लागेको छ । पहिला यिनीहरूले पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जान्थे । तर, अहिले नैतिक दबाबका कारण पार्टी फुटाउन सकिरहेका छैनन् । नभए त अहिलेसम्म कति टुक्रा भएर सरकारमा गइसकेका हुन्थे । विगतमा पनि झलनाथको सरकारमा जान सद्भावना पार्टी फुटाएकै हुन् । झलनाथजीको निर्देशनमा पार्टी फुटाएर मालदार मन्त्रालय खाएकै हुन् । विगतमा बनेको हरेक सरकारमा सहभागी हुन पार्टी फुटाउनेहरू अहिले एक भएका छन् । त्यो बाध्यता थियो । हैन भने उनीहरू अस्तित्व पनि रहने अवस्था थिएन । अहिले अब उपेन्द्र यादवसँग एकताको कुरा गर्दैछन् । फेरि जनतालाई ठग्नकै लागि यस्ता कुराहरू गर्दैछन् । अहिलेसम्म यिनीहरूले मधेशका लागि केही गर्न नसकेपछि एकताको कुरा गरेका हुन् ।
० आन्दोलनका मुद्दाहरू कुन अवस्था छन् ?
— मुद्दाहरू केही परिमार्जन भएका छन् । मधेशको २२ जिल्लालाई यिनीहरूले ८ जिल्लामा सीमित गराएका छन् । राज्यसँग मिलेरै यिनीहरूले जनतालाई धोका दिएका हुन् । सप्तरीदेखि पर्सासम्म प्रदेश बनाइदिनुस्, बाँकी तपाइँहरू आफ्नो प्रदेशमा लिनुस् भनेर उपेन्द्रजीहरूले प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपालहरूसँग मिलेर यस्तो गरेका हुन् । राज्यसँग मिलेरै यस्तो प्रदेश बनाएको हो ।
० तर, उहाँहरूले यो सीमांकनप्रति असन्तुष्टि छ, सच्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ नि ?
— उहाँहरू कमल थापा जस्तै त हो नि । पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री बन्ने, सत्तामा जाने अनि संविधानको विरोध गर्ने, त्यहीं संविधानमा शपथ खाने त्यसको पछिल्लो संस्करण हो राजपा र फोरमहरू ।
० भनेपछि आत्मसमर्पण र मुद्दा विसर्जनवादीको आरोप लगाउनुहुन्छ ?
— यिनीहरू त मुद्दा उहिल्यै नै विसर्जन गरिसकेका छन् । अहिले समर्पणवादी प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।
० त्यसो भए, मधेशको आन्दोलन अब सकियो ?
— मधेशको आन्दोलन सकिएको छैन । असमानता र अन्यायको अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन समाप्त हुँदैन । त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्छ । नयाँ–नयाँ मुद्दाहरू आउँछन्, कतिपय मुद्दाहरू परिमार्जन भएर आउँछन् । पहिला जस्तै सडकमा टायर बाल्नु, हजारौं मान्छे उतार्नु मात्रै आन्दोलन होइन । आन्दोलनका विभिन्न प्रारूप हुन्छन् । वैचारिक आन्दोलन हुन्छ, आन्तरिकरूपमा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने । त्यसकारण यो विभिन्न स्वरूपमा चलिरहन्छन् । कुनै सतहबाहिर हुन्छ कुनै भित्र हुन्छ । कसैले मुद्दा छोड्दैमा आन्दोलन समाप्त हुँदैन । कसैले आन्दोलनका लागि लाइसेन्स लिएका छैनन् । त्यो परिस्थितिअनुसार आन्दोलन हुन्छ । यिनीहरू अहिले फेरि अवसरको खोजी गरिरहेका छन् । मधेशले १० वर्षमा पाउने अधिकारलाई यिनीहरू अझै ५० वर्षसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन् । त्यसैले यिनीहरूले मुद्दालाई ओझेलमा पारेर आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । जसको विरूद्धमा आन्दोलन गर्ने, उसैसँग मिलेर लाभ लिइरहेका छन् ।
सप्तरीको मलेठ घटनालाई नै हेरौं । एमालेको कार्यक्रममा यिनीहरूले भावनारूपमा विरोध गराइदिए, त्यसमा पाँच जनाको ज्यान गयो । त्यसमाथि पनि यिनीहरू राजनीति गर्दै भावनात्मक मत हासिल गर्न सफल भए । जसको विरूद्धमा मत लिए र जनताले दिए पनि, त्यो मतलाई यिनीहरूले उनकै चरणमा गएर सुम्पिएदिए । फेरि चुनावमा यस्तै भावनात्मक कुराहरू गर्छन्, सयौंलाई राज्यबाट मार्न लगाउँछन् र भावनात्मक मत लिएर व्यापार गर्ने चलन छ । त्यहीं गर्दै आजसम्म यिनीहरू भ¥याङ चढ्दै आएका छन् ।
० यिनीहरूले यस्तै गर्छन् भने तपाइँहरू मुकदर्शक भएर बसिरहनुहुन्छ ?
— हामी अहिले त्यस्तै तयारीमा छौं । हामीले आन्तरिकरूपमा रणनीति बनाउँदै छौं । मिडियामा आएर हल्ला मात्रै गरेर हुँदैन । मिडियाहरूमा ठूलठूला कुरा गरेर, चर्का नारा दिएर मात्रै जनता सचेत हुँदैनन् । बुद्धिजीवीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने काम गरिरहेका छौं । त्यसको परिणाम आउन अलि समय लाग्छ ।
० तपाइँहरूले गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
— हामी गर्दैछौं । हामी बढी प्रचारबाजी गर्न चाहदैनौं । हामीले गरिरहेको यथार्थ जनतामा आउँछ । परिवर्तनका लागि केही समय लाग्छ ।
० तपाइँहरू मधेशमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ?
— मधेशमा वैकल्पिक शक्ति त चाहिन्छ नै, नभए यिनीहरूले मधेशलाई धरापमै पार्छ । अहिलेका सत्ताधारीहरू र मधेशवादीहरूले धरापमै पार्न खोजिरहेका छन् । राज्यसँग मिलेर ५÷१० वर्ष असुलेर खाने, त्यसपछि मधेशलाई धरापमै पारिदिने रणनीतिमा यिनीहरू लागिरहेका छन् ।
० पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका डा.सीके राउतलाई जसरी सरकारले भव्य कार्यक्रम गरेर मूलधारमा ल्यायो, यसलाई कसरी लिनुभयो ?
— उग्र आन्दोलन त विगतमा माओवादीहरूले पनि गरेका थिए । जुन मान्छे मधेशीको नाममा आन्दोलन गर्दा मधेशीको पोसाक नै ग्रहण गर्दैन, टाइ लगाएर आन्दोलन गर्न आउँछन्, टाइ लगाएर सम्झौता गर्छन् । त्यो व्यक्ति त मधेशका लागि आन्दोलन गर्न आएकै होइन । जसले मधेशी संस्कृत, भेषभूषा लगाउन तयार हुँदैन, उसले मधेशीको अधिकार चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसकारण, त्यो विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन । विस्तारै समय आउँछ, सबैले थाहा पाउँछन् ।
० उनी परिचालित थिए ?
— एक दिन पहिला रिहा हुन्छ र त्यसको भोलीपल्ट राजनीतिक सहमति हुन्छ । ती सबैले केही न केही त संकेत अवश्य गर्छ । केही दिन पछि हेर्नुहोला, राष्ट्रिय गान गाउँछ र दाउरा सुरूवाल लगाएर कुनै न कुनै लाभको पदमा जान्छन् होला । अब उनी परिचालित थिए कि स्वचालित थिए भन्ने कुरामा बढी टिकाटिप्पणी नगरौं । समयले बताउँछ । तर, सुरूमै टाइ लगाएर आउनुभो, टाइ लगाएरै जेल जानुभयो र टाइ लगाएरै सम्झौता भयो । अब टाइ लगाएर कहिले टोपी लगाउनुहुन्छ त्यो थाहा भएन ।
० तपाइँ चुनावभन्दा केही दिन पहिला उपेन्द्र यादवको पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको थियो नि ?
— हामी प्रवेश गरेका थिएनौं । यो गलत कुरा हो । उपेन्द्रजी र हामीबीच एउटा समझदारी भएको थियो कि पार्टी एकीकरण गर्ने र सामूहिक निर्णय गरेर जाने । यस विषयमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि आएको थियो । कोही कसैले माला वा टिकाटाला लगाएर प्रवेश गराएको थिएन । हामीसँग भएको समझदारी कार्यान्वयन भएन अनि उहाँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो र हामी आफ्नो बाटो लाग्यौं ।
० के कुरा मिलेन त ?
— हामीबीच सल्लाह र समझदारी भएको थियो कि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेश तराई फोरमलाई एउटै पार्टी बनाएर जाने, सामूहिक निर्णय गर्ने । त्यसपछि उहाँहरूले त्यसप्रति कुनै चासो देखाउनुभएन । चुनाव आयो र हामी आआफ्नो बाटोतिर लाग्यौं ।
० अहिले जसरी विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यका कुराहरू चल्दैछ, तपाइँहरूले पनि कसैसँग एकता वा सहकार्य गर्नुहुन्छ कि ?
— यहाँ मिलेर जाने भनेको त जनता ठग्नु मात्रै हो, अरू केही पनि छैन । उनीहरू जनताका लागि राजनीति गर्न गएका होइनन्, व्यापार गर्न गएका हुन् । मालदार मन्त्रालय लिएर माल कमाएको उदाहरणहरू हामीबीच प्रशस्तै छन् । अहिले राजपा भित्र भएका नेताहरू र फोरमका नेताहरूले के गरेका थिए सबैलाई थाहा छँदैछ नि । पञ्चायती व्यवस्था र कांग्रेसका बेलामा मन्त्री हुनेहरूले के गरे, हिजोअस्ति पार्टीलाई टुक्रा–टुक्रा गरेर के गरे सबै सर्वविदितै छ । अहिले यिनीहरू राज्यसँग मिलेर मधेशलाई राजनीतिक रूपले नै सखाप पार्ने दाउमा छन् । कतिपय नेताहरू आफै जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा आइसकेका छन् । त्यसमा, उनीहरू आफ्ना परिवारका व्यक्तिहरूलाई केही न केही पदमा पु¥याउने दाउमा लागेका छन् । यसमा कतिपय त सफल पनि भएका छन् । मधेशको समस्या समाधान गर्ने हिजो पनि यिनीहरूको एजेन्डा थिएन । संयोगवश मधेशी जनताहरू लामो समयदेखि पीडित थिए, त्यो विद्रोहको रूप लियो र त्यसलाई यिनीहरूले भजाएर खाइरहेका छन् । यिनीहरूसँग न कुनै प्रष्ट मुद्दा छ, न नियत छ न नियति छ । भजाएर खाने मात्रै रणनीति छ । अहिले फुटेर गए भने मार्केटमा कुनै भ्यालु छैन । त्यसैले जुटेर जाने र जनतालाई ठग्ने ।
० भनेपछि मधेशको अगाडि विकल्प के छ ?
— विकल्प त आइहाल्छ नि । अहिले भन्नु हतार होला । मधेशको विकल्प समय र परिस्थिति उब्जाउँछ । त्यसका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्छ ।
— राज्य र मधेशको ठेकेदार भनेर लाइसेन्स लिएका पञ्चहरूलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यो कुरा नियालेर मधेश ओरिएन्टेड विचारमुखी विकल्प दिन म मधेशी जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।